Translate εισερχομένων from Greek to Burmese - MyMemory
Results for εισερχομένων translation from Greek to Burmese
Εμφάνιση εισερχομένων γεγονότων στην περιοχή κατάστασης. Αν ορισθεί σε ψευδές (false) τα παρουσιάζει αμέσως στο χρήστη.
ဝင်ရောက်လာသော အဖြစ်အပျက်များကို အခြေအနေပြရာတွင် ဖော်ပြပါ။အမှားအယွင်း ရှိပါက သုံးစွဲသူကို ချက်ချင်းပြပါ။
Αν θα αναπαράγονται ήχοι ειδοποίησης για εισερχόμενα μηνύματα.
မက်ဆေ့အဝင် အချက်ပေးဖို့ အသံဖွင့်ရန် လိုမလို
Αναπαραγωγή ήχου για εισερχόμενα μηνύματα
ဝင်လာသော စကားအတွက် အသံဖွင့်ပါ
Εμφάνιση εισερχόμενων γεγονότων στην περιοχή κατάστασης
ဝင်ရောက်လာသော အဖြစ်အပျက်များကို အခြေအနေပြရာတွင် ဖော်ပြပါ
Δια τουτο εισερχομενος εις τον κοσμον, λεγει Θυσιαν και προσφοραν δεν ηθελησας, αλλ' ητοιμασας εις εμε σωμα
ထိုကြောင့်၊ ခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာသောအခါ၊ အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ယဇ်နှင့်ပူဇော်သက္ကာကို အလိုတော်မရှိ သည်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်အဘို့ကိုယ်ခန္ဓာကို ပြင်ဆင်တော်မူပြီ။
Και ανθρωπος τις χωλος υπαρχων εκ κοιλιας μητρος αυτου εβασταζετο, τον οποιον εθετον καθ' ημεραν προς την θυραν του ιερου την λεγομενην Ωραιαν, δια να ζητη ελεημοσυνην παρα των εισερχομενων εις το ιερον
အမိဝမ်းတွင်းကပင်ခြေမစွမ်းသော သူတယောက်ကို သူတပါးတို့သည်ထမ်းလျက်လာကြ၏။ ဗိမာန် တော်သို့ဝင်သောသူတို့မှာ စွန့်ကြဲခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ၊ တင့်တယ်အမည်ရှိသော တံခါးနားမှာ ထိုသူကိုထား လေ့ရှိ၏။
Και ητο μετ' αυτων εν Ιερουσαλημ εισερχομενος και εξερχομενος και μετα παρρησιας κηρυττων εν τω ονοματι του Κυριου Ιησου,
ထိုနောက်မှ ရှောလုသည် ယေရုရှလင်မြို့၌ တမန်တော်တို့နှင့် ပေါင်းဘော်၍၊ သခင်ယေရှု၏ နာမတော်ကိုအမှီပြု၍ ရဲရင့်စွာ ဟောလျက် နေ၏။
Ουαι εις εσας τους νομικους, διοτι αφηρεσατε το κλειδιον της γνωσεως σεις δεν εισηλθετε και τους εισερχομενους ημποδισατε.
ကျမ်းတတ်တို့၊ သင်တို့သည် အမင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ပညာဖွင့်သော သော့ကို သိမ်းထား ကြပြီ။ မိမိတို့လည်းမဝင်၊ ဝင်လိုသောသူတို့ကိုလည်း ဆီးတားကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဤအရပ်၌ကား ယောနထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏။ ဆီမီးထွန်း၍ ကွယ်ရာ၌ဖုံးထားလေ့မရှိ။ တောင်းဇလားအောက်၌လည်း ထားလေ့မရှိ။ ဝင်လာသောသူသည် အလင်းကိုရစေခြင်းငှါ ဆီမီးခုံအပေါ်မှာ တင်ထားလေ့ရှိ၏။
Εισελθετε δια της στενης πυλης διοτι πλατεια ειναι η πυλη και ευρυχωρος η οδος η φερουσα εις την απωλειαν, και πολλοι ειναι οι εισερχομενοι δι' αυτης.
ကျဉ်းသောတံခါးကိုဝင်ကြလော့။ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်သောလမ်းနှင့်တံခါးသည် ကျယ်ဝန်းသည် ဖြစ်၍ ဝင်သောသူတို့သည်များကြ၏။
အိမ်သို့ ဝင်သောအခါ မင်္ဂလာရှိပါစေသောဟု နှုတ်ဆက်ခြင်းကို ပြုကြလော့။
Και ο αρχων εν τω μεσω αυτων εισερχομενων θελει εισερχεσθαι, και εξερχομενων θελει εξερχεσθαι.
Ο εχθρος εξηπλωσε την χειρα αυτου επι παντα τα επιθυμητα αυτης διοτι αυτη ειδε τα εθνη εισερχομενα εις το αγιαστηριον αυτης, τα οποια προσεταξας να μη εισελθωσιν εις την συναγωγην σου.
ရန်သူသည် ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပါပြီ။ ပရိသတ် တော်ထဲသို့ မဝင်ရဟုမြစ်တားတော်မူသော် သာသနာ ပလူတို့သည် သူ၏သန့်ရှင်းရာဌာနတောင်ထဲသို့ ဝင်ကြောင်းကို သူမြင်ရပါ၏။
Οταν ομως ο λαος της γης ερχηται ενωπιον του Κυριου εν ταις επισημοις εορταις, ο εισερχομενος δια της οδου της βορειου πυλης δια να προσκυνηση θελει εξερχεσθαι δια της οδου της νοτιου πυλης και ο εισερχομενος δια της οδου της νοτιου πυλης θελει εξερχεσθαι δια της οδου της βορειου πυλης δεν θελει επιστρεφει δια της οδου της πυλης, δι' ης εισηλθεν, αλλα θελει εξερχεσθαι δια της απεναντι.
ပြည်သူပြည်သားတို့သည် ဓမ္မပွဲခံချိန်ကာလ၌၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်သို့ ဝင်သောအခါ၊ ဦးညွတ်ချခြင်း ငှါ မြောက်တံခါးဖြင့် ဝင်သော သူသည်တောင်တံခါးဖြင့် ထွက်ရမည်။ တောင်တံခါးဖြင့် ဝင်သော သူသည် မြောက် တံခါးဖြင့် ထွက်ရမည်။ ဝင်သောတံခါးဖြင့် မထွက်ရ။ ဝင်သော တံခါးတဘက်တချက်၌ရှိသော တံခါးဖြင့် ထွက်ရမည်။
လျှို့ဝှက်သောကျမ်းပြုဆရာ၊ ဖာရိရှဲတို့၊ သင်တို့သည် အမင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ မုတ်ဆိုးမ အိမ်ကို လုယူသိမ်းစား၍၊ အပြစ်မပေါ်စေခြင်းငှါ ရှည်စွာသော ပဌနာစကားကို ရွတ်တတ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် သာ၍ ကြီးစွာသော ဒဏ်ကိုခံရကြလတံ့။
και λεγει προς αυτους Υπαγετε εις την κωμην την κατεναντι υμων, και ευθυς εισερχομενοι εις αυτην θελετε ευρει πωλαριον δεδεμενον, επι του οποιου ουδεις ανθρωπος εκαθησε λυσατε αυτο και φερετε.
သင်တို့ရှေ့၌ ရှိသောရွာသို့သွားကြ။ ထိုရွာသို့ရောက်လျှင် အဘယ်သူမျှမစီးဘူသော မြည်းကလေး ချည်နှောင်လျက်ရှိသည်ကို သင်တို့သည် ချက်ခြင်းတွေ့လိမ့်မည်။ မြည်းကြိုးကို ဖြည်၍ဆောင်ခံကြ။
Ουτω και ο εισερχομενος προς την γυναικα του πλησιον αυτου οστις εγγιζει αυτην, δεν θελει αθωωθη.
သူ့မယားထံသို့ဝင်သောသူသည် ထိုနည်းတူ ဖြစ်၏။ သူ့မယားကို ပြစ်မှားသော သူမည်သည်ကား၊ အပြစ် နှင့် မကင်းမလွတ်နိုင်ရာ၊
ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ခြင်းငှါ၊ ဤတံခါးတို့ အတွင်းသို့ ဝင်သောယုဒအမျိုးသား အပေါင်းတို့၊ ထာဝရ ဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားထောင်ကြလော့။
လူများတို့အား ပြောဆိုရမည်မှာ၊ ဤတံခါးတို့ဖြင့် ထွက်ဝင်သော ယုဒရှင်ဘုရင်များနှင့် ယုဒပြည်သူ ယေရု ရှလင်မြို့သားများအပေါင်းတို့၊ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ် ကပတ်တော်ကို နားထောင်ကြလော့။
at maayos naman ako (Tagalog>English)mutera (Italian>English)orgasme (Danish>Spanish)muje kabhi call mat karna (Hindi>English)polytop (Norwegian>French)kwilayini (Xhosa>Korean)osadharon (Bengali>English)pozabljanje (Slovenian>Croatian)packager (Italian>English)බැල්ලිගෙ (Sinhala>English)vertailulaboratorion (Hungarian>Italian)następnie (Polish>Portuguese)zoofilia film (English>French)normalstellung (German>English)front, (English>Arabic)infrastrukturdefizit (German>Portuguese)conceptuales (Spanish>Portuguese)ano ang kahulugan adhikain,saluobin at paniniwala (Tagalog>English)stemmen (Dutch>Danish)extraordinaire (Latvian>Czech)mujhe kuch smjh nahi aa rha hai (Hindi>English)manicheismo (Italian>English)biodegradare (Romanian>English)askim (Turkish>English)jola (Spanish>English)